ikhaya » DMCA
Sactivator.com luthobela 17 U.S.C. § 512 kwaye i Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Ngumgaqo-nkqubo wethu ukuphendula naziphi izaziso mthetho kwaye athathe amanyathelo afanelekileyo ngaphantsi kwe Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") neminye imithetho esebenzayo ipropati.
Ukuba isixhobo sakho njengemveliso zithunyelwe kwi sactivator.com okanye ukuba amakhonkco u wakho mbandela njengemveliso zibuyiselwa ngokusebenzisa enjini yokukhangela zethu kwaye ufuna le zisuswe izinto, kufuneka unikezele kunxibelelwano olubhaliweyo ukuba iinkcukacha ulwazi oludweliswe kwicandelo elilandelayo. Nceda lumkela ukuba uya kuba noxanduva lokuhlawulela umonakalo (kubandakanywa neendleko nemirhumo yamagqwetha) ukuba aziyiyo ulwazi oludweliswe kwisayithi yethu wophula kwi oshicilelo yakho.
Sicebisa ukuba kufuneka kuqala uqhagamshelane negqwetha ukuze ufumane uncedo lwezomthetho ngalo mba.
Iziqalelo zilandelayo kufuneka lubandakanywe copyright yakho kwaphulwa ibango:
Nika ubungqina umntu ogunyazisiweyo ukuba asebenze egameni umnikazi ilungelo elikhethekileyo nezelwe yesityholo.
Nika iinkcukacha zoqhagamshelwano olwaneleyo ukuze sibe singaqhagamshelana nawe.
Kufuneka kwakhona kuquka idilesi yemeyile esebenzayo.
Kufuneka ukuchonga ngokweenkcukacha ezaneleyo umsebenzi njengemveliso ibango ukuba athe anyhashwa kwaye kuquka ubuncinane omnye umba wophendlo phantsi apho umbandela livela sactivator.com iziphumo zophendlo.
Yingxelo iqela sikhalaza unalo kukholo kakuhle ukuba ukusebenzisa izinto ngendlela wakhalaza engagunyaziswanga ngumnini copyright, arhente yaso, okanye umthetho.
Yingxelo iinkcukacha isaziso ichanekile, naphantsi isohlwayo lokuxoka, ukuba iqela ukukhalaza ogunyazisiweyo ukuba asebenze egameni umnikazi ilungelo elikhethekileyo nezelwe yesityholo.
Kufuneka sityikitywe ngumntu eligunyazisiweyo ukuba asebenze egameni umnini ilungelo elikhethekileyo ekutyholwa ukuba ukuba one.
Thumela isaziso yolwaphulo-!
Ingama lakho (kufunwa)
Imeyile yakho (kufunwa)
ling isikhalazo sakho kwamanye amaqela afana Internet Service Provider wethu akayi ekukhawuleziseni isicelo sakho kwaye kungabangela impendulo kwalibaziseka ngenxa isikhalazo hayi kakuhle ukuba efayilini.
Qiniseka Phambi DMCA
Cubase Pro 9.5 uthanda